पर्यटन बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउँदै, को होलान बोर्डको सिइओ « Aarthik Sanjal पर्यटन बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउँदै, को होलान बोर्डको सिइओ – Aarthik Sanjal
पर्यटन बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउँदै, को होलान बोर्डको सिइओ
१४ माघ २०७६, मंगलवार ०९:५०
काठमाडौं, माघ १४ । एक दुई दिन भित्रै नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । सरकारले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को चयनका लागि अन्तिम तयारी गरेको छ । बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक आज बस्दै छ । उक्त बैठकले बोर्डको सिइओ नियुक्ति आजै गर्ने सम्भावना छ । सचिव अध्यक्ष रहेको बोर्ड सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकले दीपक बस्ताकोटी, धनन्जय रेग्मी र हिक्मत सिंह ऐरमध्ये एक जनालाई सिइओ चयन गर्ने छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षक पद मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओका लागि ९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
प्रारम्भिक छनोटमा परेका नौ जनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । त्यसमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरिएको थियो । अहिले ती तीन जनाबाट एक जना चयन गर्दै छ ।
निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको कार्यकाल सकिएपछि गत मंसिर १८ गते विज्ञापन खुलाइएको थियो । विज्ञापनपछि १७ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्येबाट उपसमितिले काशिराज भण्डारी, दीपक बस्ताकोटी, दीपकराज जोशी, डा. धनञ्जय रेग्मी, नवीन पोखरेल, बच्चुनारायण श्रेष्ठ, रोहिनीप्रसाद खनाल, सन्तोषविक्रम थापा र हिकमत सिंह ऐरको नाम छनोट गरिएको थियो ।
सिइओ छनोटका लागि सिफारिस गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य विप्लव पौडेल र कृष्णबहादुर महरा सम्मिलित उपसमिति बनाइएको थियो । समितिका दुई विज्ञका रूपमा पूर्व पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पर्यटन व्यवसायी सागर पाण्डे थिए ।
बोर्डमा सरकारी पाँच र निजी क्षेत्रका ६ गरी ११ जना सञ्चालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, बोर्डका कार्यकारी भने सिइओ हुनेछन्् । बोर्डको सिइओको कार्यकाल भने चार वर्षको हुनेछ । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशील डा. धनञ्जय रेग्मीको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । त्यस कारण पर्यटन अनुसन्धानको क्षेत्रमा विज्ञता आर्जन गरेका डा. रेग्मीलाई सिइओको बलियो दाबेदार मानिएको छ ।
सन् १९७५ स्याङ्जामा जन्मिएका डा. रेग्मी नेपालको पर्यटनलाई विषय बनाएर लामो समयदेखि अनुसन्धानरत छन् । डा.रेग्मी नेपालका प्रख्यात हिमाली भूवैज्ञानिक र हिमनदी विज्ञ हुन् ।
उनले नेपालको सबैजसो हिमाल, हिमताल र हिमाली क्षेत्रहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेका छन् । उनले ६ वर्ष कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको वातावरणीय अनुसन्धान गरेका छन् । डा..रेग्मीले सन् २००६ मा जापानको सापोरो स्थित होकाइदियो विश्वविद्यालयबाट ‘माउन्टेन इन्भारोमेन्टल जिओ साइन्स एण्ड जिओलोजिकल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।